Iindaba - Amandla eZimpawu ze-LED zangaphandle
Uphando lubonisa ukuba uphawu lwe-LED lwangaphandle ludlala indima ephambili kumthengi okanye kwisigqibo somthengi sokunxibelelana neshishini lakho.
Phantse i-73Ipesenti yabathengi bathi bangene kwivenkile okanye ishishini abangazange balityelele ngaphambili ngokusekelwe kuphawu lwalo.
Umqondiso wakho wangaphandle uhlala uyindawo yakho yokuqala yokuthinta kunye nomthengi, yiyo loo nto kubalulekile ukuba wenze uphawu olucacileyo nolunomtsalane olutsala umthengi kwaye lubonakalise amava abaya kuba nawo ngaphakathi.
Malunga ne-65Iipesenti zabathengi bakholelwa ukuba uphawu lweshishini lubonisa umgangatho weemveliso okanye iinkonzo zalo, kwaye ngaphezulu kwe-50% yabaphenduli bophando babonise ukuba imiqondiso engalunganga iyabathintela ukuba bangene nakushishino.
Ngelixa eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba ube nophawu lwangaphandle kwishishini lakho, phantse kubaluleke ngokulinganayo ukuba uyilo lweempawu kunye nomgangatho ujongeka unedumela. Njengoko olu phando lubonisa, imiqondiso engenzi nzuzo iya kugcina abathengi abanokubakho ukuba bangalithembi ishishini lakho. Ukuqinisekisa ukuba iimpawu zakho zeshishini langaphandle ziqhuba ukugcwala kwabantu kangangoko kunokwenzeka, eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyenzile kukuqinisekisa ukuba umyalezo wakho uchanekile kwaye unyanzelekile. Ukuba umqondiso wakho ubonakalisa ukunxiba, unokufuna ukuqaphela ukutyala imali entsha. Jonga ukhetho lwethu lweempawu zangaphandle ukufumana uphawu olugqibeleleyo lweshishini lakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
Phantse 59Ipesenti yabathengi bathe ukungabikho kophawu kuyabathintela ekungeneni kwivenkile okanye ishishini.
Mhlawumbi uqale ibhizinisi lakho elincinci kwaye uninzi kwiplate yakho. Okanye mhlawumbi uphantsi kwengcinga yokuba uphawu lwangaphandle alulotyalo-mali lufanelekileyo. Nokuba zithini na, ezi nkcukacha-manani ziphinda-phinda indlela ekubaluleke ngayo ukubeka phambili iimpawu zangaphandle. Ngaphandle kweyodwa, kunokwenzeka ukuba ulahlekelwe yishishini kwaye ungadlulisela kubathengi bakho ukuba ishishini lakho alithembekanga ngandlela thile. Ngaba uxakekile yindlela yokukhetha uphawu lwangaphandle oluchanekileyo lweshishini lakho? Zibuze le mibuzo mi-5 ngaphambi kokuthenga kwakho ukuqinisekisa ukuba uza kukhetha eyiyo.
Phantse isiqingatha, 50Iipesenti ezi-7, zabathengi baseMelika ziqhutywa lishishini elifunwayo ngaphandle kokuzifumana ngenxa yokungoneli kwemiqondiso.
Ithuba lokuba umntu akhangele uhlobo lweemveliso ozithengisayo okanye inkonzo oyinikezelayo iphezulu, kodwa ngaphandle komqondiso, bayokufumana njani? Ukwenza uphawu olwahlukileyo, oluphezulu lwangaphandle kwishishini lakho kuya kukuvumela ukuba ungaqinisekisi kuphela indawo okuyo abathengi, kodwa kunye nokwakha ulwazi ngophawu. Ngale ndlela, kwixesha elizayo xa umthengi enesidingo semveliso kunye neenkonzo zakho, baya kulikhumbula ishishini lakho kwaye bazi ngqo ukuba bayaphi.
Ukufundeka komqondiso yeyona nto ibalulekileyo ebangela ukuba abathengi bazame imveliso okanye inkonzo yevenkile.
Abathengi bakho abanokubakho baxakekile. Ungayichazanga eyokuba banokukhukula ngeendlela ezahlukeneyo zentengiso mihla le. Ukuba umqondiso wakho awufundeki, kukhuselekile ukuthi abazukucothisa kwaye bazame ukuqonda ukuba ubonelela ngantoni. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba umqondiso wakho ubonise ukuba ungubani kunye nento oyenzayo ngendlela ecacileyo necacileyo. Ukuphonononga imiqondiso yakho ukuqinisekisa ukuba ibandakanya kuphela olona lwazi lubalulekileyo malunga neshishini lakho kwaye alixinekanga ngemiyalezo engeyomfuneko okanye kwimizobo, kwaye umbala wemvelaphi kunye neeleta kulula ukufundeka.